Weli baxay laaca timaha isku dayayaan in ay sawiro ka iPad wareejiyo USB flash drive? Waxaa la og yahay in aad si toos ah u dhoofin karaan photos ee iPad camera Roll in flash USB deeruhu cable USB in kombuutarka ah oo wuxuu galay. Si kastaba ha ahaatee, ma jirto hab uu diyaar u yahay inuu sawiro ka iPad Photo Library wareejiyo. Xaaladdan oo kale, waa doorasho fiican in ay isku dayaan qalab dhinac saddexaad xirfadle, sida Wondershare TunesGo Retro (dadka isticmaala Windows) ama Wondershare TunesGo Retro (Mac) . Iyada oo ay taasi qalab fiican, waxaad si fudud u soo jiidi kartaa jeedi photos ee iPad Camera Roll oo Photo Library in flash drive USB ah.
Part I: iPad ka Bedelka photos in PC ka dibna ka PC in USB flash drive
waxaa jira labo xal si ay u gudbiyaan sawiro in USB flash drive gacanta diredtly via computer:
Xalka 1: sawiro ay kala soo wareegeen iPad in computer isticmaalaya email;
Solution 2:. photos Transfer ka iPad in computer isticmaalaya iPhoto
Markaas sawiro ka PC wareejiyo USB flash drive.
Waxaa kale oo ku dhowaad isku mid ah la wareejiyo "sawiro kala iibsiga ka iPhone in USB flash drive" . Sidaas halkan waxaan ku tilmaami karaa this Guide: Sidee si ay u gudbiyaan Pictures ka iPhone in Flash Drive
Qaybta II: sawiro Transfer sameeyaan iPad u iftiimiyo drive la TunesGo Retro easliy
Download qalab si ay sawiro ka iPad wareejiyo USB drive.
Fiiro gaar ah: Labada Windows version iyo versions Mac si buuxda u la jaan qaada New iPad ayaa, iPad mini, iPad bandhigay isha, iPad 2 iyo iPad socda iOS9, iOS8, macruufka 7, macruufka 6 & macruufka 5. In this article, waxaan isku dayi doonaa version Windows ah, in uu yahay, Wondershare TunesGo Retro.
Waxa ugu horeeya ee aad samaynaysaa waa si loo soo dajiyo TunesGo Retro on your computer. Waxa maamula si ay u muujiyaan furmo suuqa hoose ee shaashadda kombiyuutarka. Markaas, xirmaan flash drive USB in kombiyuutarka la cable USB ah. Ka dib markii uu la ogaado, waa in aad furto disk flash drive ee kombiyuutarka.
Markaas, furaysto cable USB ah oo wuxuu galay in ay ku xidhmaan aad iPad in kombiyuutarka. TunesGo Retro ogaan doonaa iPad mar, ka dibna waxa ay u muujiyaan in uu furmo suuqa hoose. In galeeysid bidix carmalka aasaasiga ah, waxaad ka arki kartaa music, playlists, sawiro, iwm on your iPad.
Tallaabada 2. photos Nuqul ka iPad in USB flash drive
Ka dibna, u tag "Sawirro" galeeysid bidix. Roll Camera iyo Photo Library ka soo muuqanayaan Murayaad saxda ah. Jiid jeedi labada fayl in flash disk ah. Ama dooran aad galka (s) oo guji "Dhoofinta in". In file suuqa kala pop-up browser, heli disk USB flash drive ka. Markaas, nuqul galka (s), waxa uu.
Si aad u dhoofiyaan sawiro, aad ku furi karo Roll Camera ama Photo Library, iyo xulo photos doonayay, ka dibna u dhoofiyaan si USB flash drive.
Fiiro gaar ah: The albums hoos yaala qaybta Photo Library abuuray TunesGo sidoo kale Retrocan loo dhoofinayay USB flash drive.
Si wanaagsan baad yeeshay! Waxaad u suurtagashay in ay sawiro ka iPad wareejiyo flash drive. Dhab ahaantii, ka sokow photos, TunesGo aad Retroempowers inuu u dhaqaaqo files music, sawiro, xiriirada iyo SMS in kombiyuutarka. Sidaas, download TunesGo Retroto dhaqaaqo photos iPad in USB flash drive.
Video Tutorial u Photos beddelashada ka iPad in USB Flash Drive
Sida loo soo celiya iPad ka kaabta
> Resource > iPad > Photos Transfer ka iPad in USB Flash Drive